Maxaa Sababay In Madaxweyne Muuse Biixi Iyo Maxamed Kaahin Ay Difaacan Xarunta Dhaqanka Ee Hargeisa Iyo Dugsiga Abaarso Iyada Oo Aan La Samayn Baadhitan Madax Banaan
Wednesday August 18, 2021 - 20:57:13 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Madaxwayne Muuse Biixi Iyo Wasiir Maxamed Kaahin Shalay iyo Maanta Waxay si taageernimo ku jirto u difaaceen Abaarso School iyo Xaruunta dhaqanka ee Hargaysa.!
Madaxdeenu iyagaa inooga masuul ah Diinta iyo Dalkaba
Hadii Dadka qaarkii ay eedeeyeen Labadaa goobood oo ay ku ee deeyen inay wadaan Dagaal hoose oo Diintena iyo dhaqan keena ku wa jahan madaxdeenu ma inay qolo daafacdaaba mise waa inay u garnaqaan oo arinta labada dhinac midka sax san iyo midka qaldan baadhis intay ku sameeyaan hadhow midka qaldan Talaabo laga qaado shacabkana lala wadaago baa .?!
Dawladeenu Waa dawlad islaam ah dadkeeduna uu islaam yahay Arintani maaha arin la fududaysan karo waa arin taabanaya mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena sidaas marka ay tahay waa arin ka wayn in qolo si caadifadaysan ay wax u dhaliisho ama qolo kale si jibaysan wax u daafacdo.!
Qofka muslimka ahi waxa uu ogyahay oo Uu ilahay u sheegay in ay gaalo cadawgooda kowaad ay tahay.
Hadii Tuhun ah in labadaa goobood ee Abaarso school iyo Xaruunta dhaqanka Hargaysa in Diinteena iyo Dhaqan keena Hab qarsoon oo Maskixiyan ah ay dagaal inoogu wadaan laynooga digay ogow digniintaasi waa mid shaqsi kasta iyo guud ahanba inoo taabanaysa sidaa laarjigeed maaha in dadka qaar ay u fahmaan in ay tahay arin aan khusayn amaba aan mustaqbalka naftiisa ta ehelkiisa iyo ta dalkiisaba taabanaya inaanay ahayn.
Hadii Arinkani uu yahay arin inaga wada dhaxeeya khatarta lagadigayaana ina wada taabanayso waa in aynu si wada jir ah aynu baadhis qoto dheer aynu ugu samaynaa arinkan oo aan la fududaysan Culimo,Bulsho,iyo Dawlada oo aan loo arki arin cid gaar ah khuseeya.
Ugudan bayntii :…….
Waxaan soo jeedin lahaa labadaa goobood Arinkoodu in badan ayuu inagu soo noqnoqday in baadhis qoto dheer oo culimo iyo Aqoonyahnkena Barayaasha jaamacadaha isugu jira ay baadhis ku sameeyan
Qolyaha Eedaynayaana Cadaymaha waxay ku edaynayaan ay soo bandhigaan Qolada la eedaynayaana is baraxaan.!!
Maxamed Saleban Daroor